Axmed Madoobe oo xabsiga ku booqday C/kariin Qalbi Dhagax (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • May 6, 2018
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo maalmahan ku sugnaa magaalada Addis Ababa ayaa la sheegay inuu xabsiga ku booqday C/kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa Sarkaal ka tirsan jabahadda ONLF, kaasoo bishii August ee sanadkii hore ay dowladda Soomaaliya u gacan gelisay Itoobiya.
Xasan Sheekh oo Addis Ababa kula kulmay Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya
Sagal Radio Services • News Report • February 18, 2015
Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo shalay u kicitimay dalka Itoobiya ayaa kulan la yeeshay ra’iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desaling.
Magaalada Adis Ababa oo lagu qabtay Ruux Soomaali ah oo doonayay in uu is qarxiyo
Sagal Radio Services • News Report • June 4, 2014
Dowlada Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in ay ka hortageen weerar isqarxin ah oo laga fulin rabay Magaalada Adis Ababa, ayna gacanta ku dhigeen ruux katirsan Al-Shabaab ay tilmaameen in uu doonayay in uu weerarkaasi fuliyo.
Madaxweynaha Koofurta Sudan iyo Hogaamiyaha Mucaaradka oo heshiis ku gaaray Addis Ababa
Madaxweynaha Koofurta Sudan Salva Kiir iyo Hogaamiyaha Mucaaradka Reik Machar ayaa heshiis nabadiid ku kala saxiixday magaalada Addis Ababa, kadib kulankooda u horeeyay ay yeeshaan tan iyo markii uu bilowday dagaaladii dalkaas.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo soo dhaweeyay Warmurtiyeedka kasoo baxay shirweyanaha aan caadiga ahayn ee Madaxweynayaasha Urur Goboleedka IGAD:-War-Saxaafadeed
Sagal Radio Services • News Report • March 14, 2014
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed oo ka qaybgalay Shirweynaha 25aad ee aan caadiga ahayn ee Madaxweynayaasha Urur Goboleedka IGAD ee maanta ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa soo dhaweeyay taageerada loo fidiyay dalka Soomaaliya iyo heshiiska Koonfurta Suudaan, waxaana uu ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo colaadda , looguna gurmado dalkaasi oo cunno-yari ay soo wajahday.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo xalay gaaray magaalada Addis Ababa (Sawirro)
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay kamid yihiin qaar ka tirsan Xukuumaddiisa oo shalay gelinkii dambe ka soo magaalada Muqdisho ayaa soo gaaray xalay soo gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, iyadoo si weyn loogu soo dhoweeyay wafdiga Ra’iisul Wasaaraha garoonka dayuuradaha ee Addis Ababa.